#AMBOO BIYAA GOTAA. GUDAR MOROMI cimma irraa olee. Qeerroon Amboo dhamsaa Oromiyaa dhaf dabarsaa jiruu. Qabsoon amma Qabsoo FXG dha Oromiyaan Qeerroon hundi kana irrati qophahu qaba jedhu. Sukkaarri Konkolaataa gurguddaa baajoo lama lamaa qabu 40 magaalaa Moyyaaleetti qabamee jira Biyya Oromitaa keessaa sukkaara omishamu uummaanni ji’attu al takkaa argama. Sukkaara argamu kanaanis kan abbaa itti […]